Greenways in Oromiffa - Transportation | seattle.gov
Seattle neetworkii ijaaruu irratti argamti neighborhood greenways. Neighborhood greenways isiniif, maatii keessanii fi ollaawwan keessan daandiilee jireenyaa nageenya irra caalaa qaban, irra caalaatti nageenyaan guuttamanii dha. daandiilee irratti sagalee konkolaataa isa xiqqaa fi saffisa waliin greenway kan itti aanu gochuu danda’a.
Eegumsa nageenyaa irra caalaatti fooyyessuu
Namootni daandiilee hojiin itti baayya’atu akka ce’an gargaaruu
Konkolaattotaa fi daandiilee gurguddoo irraa dheeffuun daandiilee ganda keessaa fayyadamuuf akka hin jajjabeeffamne gochuu
Amala iddoo jireenyummaa ganda isaanii eeganii tursiisuu
Saffisa konkolaataawwanii saffisa isa xiqqaa irratti daangessuu
Bakka namootni itti deemuu barbaadan kan akka iddoo bashannanaa, manneen barnootaa, suuqiiwwanii fi mana nyaataa fakkaatanii akka deeman gochuu.
Neighborhood greenways sararawwan biskileetiin irra deemu kan of keessaa hin qabne yoo ta’an taateen isaan uuman yoo jiraates xiqqaa dha. Baay’een isaanii sagalee kennitoota waggaa sagaliin kan mirkanaa’e Bridging the Gap galii sassaabduu jedhamuun deeggarsi maallaqaa kan godhamuufi. SDOT gaaffii baay’ee isaanif fudhatee jira. Dhugumatti jiraattotni baay’ee ta’an gara ganda isaanii dhufuuf akka isaan gargaaru Seattle Neighborhood Greenways filachuu jalqabuu isaanitiin baay’ee gammadaa jiru.
Rainier Valley North-South
Eagle Staff connection
Central Ridge & Lowell - Meany connection
Daandiilee amma jiran
Daandiilee nageenyi isaanii eegamee kan namatti tolan ta’an.
Irra caalaatti waca hin qabnee fi sochii hawaasummaa irra caalu qaban
Daandiilee nageenyi isaanii eeggame, waca hin qabne, irra caalaatti maal akka ta’u tilmaamamuu kan danda’u
Iddoo daandii itti qaxxaamuran kan nageenyi isaanii eegame fi karaa lafa deemtotaa gaarii ta’e
Neighborhood greenways bu’ura gaarii irratti kan hundeeffaman ta’anii fooyyessa xixiqqoo dhuma irratti jijjiirama guddaa fidan yeroo hunda ni godhu. Gandootin tokkoon tokkoon isaanii ofii isaanitiin adda dha. Haata’u malee, amaloota walii kan ta’anii fi iddoo hundatti mul’atan greenway ni jiru.
Saffisa konkolaataa sa’aatiitti gara maayilii 20 jijjiiruu
Blookiwwan tokkoon tokkoon irratti safartuu saffisaa tokko ida’uu.
Bakka namootni itti deemuu barbaadan akka argatan gargaaruuf mallattoolee fi mallattoolee lafoo deemtotaa itti dabaluu
Daandiiwwan hojiin itti baayy’atuu fi ittiin qaxxaamuraman irratti qarqara daandii dabalataa, daandiilee furtuu ariitii, bakka lafoo deemtootni irratti qaxxaamuran, qoodduu daandii fi mallattoo tiraafikii kaa’uu.
Daandiiwwan greenway qaxxaamuran irratti mallattoo dhaabi jedhu dabaluu.
Daandiiwwan lafa deemtotaa walirraa hincitne fi daandiiwwan konkolaataa akkasumas qarqara lafa qaxxaamura daandii irratti riqicha dabalataa dabaluu.
Qajeelfamawwan itti fayyadama Neighborhood Greenways
Mallattoolee fi siignaalota tiraafikaa hundaaf ajajamaa.
Greenway. Irra turuuf mallattoolee hordofaa
Lafoo deemtotaa fi konkolaataawwan dursa daandii qabaniif dursa kennaa.
Daandiiwwan qaxxaamurtuu fi irra daddarban irratti eeggannoon deemaa.
Greenway irratti turuuf mallattoolee qarqara daandii biskileetii hordofaa.
Lafoo deemtotaa fi ooftota biskileetii eeggannoon daawwadhaa.
Iddoo konkolaataan itti dhaabbatee baatanii gara daandii guddaatti yoo galtan yeroo hunda karaa duubaa, mirgaa fi bitaatti konkolaataa keessan sochoosuu keessaniin dura daawwadhaa.
Daandii qaxxaamurtuu yookin irra daddarban irratti konkolaataa keessan naannessuun dura saffisa keessan hir’isaa.
Mallattoolee qarqara daandii biskileetii irra oofuun raqkkoo hin qabu.
Wanti isin gochuu qabdan yoo jiraate, nama oofaa jiruuf saffisa nageenya amansiisaa isaa kennuun isa faana deemaa yoo xiqqaate isin lamaan gidduutti fageenyi caammaa sadi ta’e jiraachuu isaa mirkaneeffadhaa.
Balbala konkolaataa keessan yoo bantan eeggannoo godhaa. Jalqaba irratti namootin daanddii irra demaa jiran yookin biskileetii oofaa jiran jiraachuu fi hin jiraannee isaanii mirkaneeffadhaa.